ဖြိုးမြတ်အောင် ကို ခွေး နဲ့ နှိုင်းလိုက်တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါ က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် – GuGuGarGar
ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ မကြာသေးခင် က မြန်မာအိုင်ဒေါ ကနေ လှည့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် ရဲ့ အဖြစ်ဟာ တနိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေ ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။ အိုင်ဒေါဝင်နာ တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့် ၊ အများနည်းတူ လက်မှတ်ပါခဲ့ပေမယ့် လုံခြုံရေး ကိုယ်တိုင်က ပေးမဝင်ခဲ့တာကြောင့် အိုင်ဒေါ ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။
လတ်တလောမှာ မြန်မာအိုင်ဒေါ တာဝန်ရှိသူတွေက အဆိုပါကိစ္စ ကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ လက်ရှိမှာ အိုင်ဒေါ မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် က ဖြိုးမြတ်အောင် ကို ခွေးနဲ့ နှိုင်းပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Nyan Lynn Aung အကောင့်ပိုင်ရှင်က “ခွေးတောင်မှ ထမင်းကျွေးတဲ့ လက်ကို ပြန်ကိုက်ရင် အစာငတ်သေးတာပဲ… ခွေးထက်တော့ ဦးဏှောက်ရှိစမ်းပါကွာ…စောက်ရူးနားကန်း လို ထုံအအ လုပ်မနေနဲ့ ညီလေး….” ဆိုတဲ့ စာကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြိုးမြတ်အောင် ဖန်ဂရုတွေထဲမှာ အဆိုပါ စာဟာ တောမီးလိုပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။
နာရီအတော်ကြာတဲ့အခါမှာ “ခွေးတောင်မှ ထမင်းကျွေးတဲ့ လက်ကို ပြန်ကိုက်ရင် အစာငတ်သေးတာပဲ…ခွေးထက်တော့ ဦးဏှောက်ရှိစမ်းပါကွာ…စောက်ရူးနားကန်း လို ထုံအအ လုပ်မနေနဲ့ ညီလေး….မင်းတို့ ထင်တဲ့ PMA ကို ငါမပြောဘူး..ငါမှာ သူက လွဲလို့ အခြား အသိမရှိရဘူး လာ??? ဆိုပြီးစာကို ပြန်ပြင်ခဲ့ပါတယ်။ …
ပရိသတ်ကြီးရေ၊ အခုလို ပြောဆိုလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ ဖြိုးမြတ်အောင် ရဲ့ ပရိသတ်တွေက တော်တော်လေးဒေါပွခဲ့ကြတာပါ ။ အခုလို ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အပေါ် ဒီလိုမျိုး ပြောဆိုသင့်သလား ဆိုတာမှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ကြပါဦး။
ပရိသတျကွီးရေ ၊ မကွာသေးခငျ က မွနျမာအိုငျဒေါ ကနေ လှညျ့ပွနျခဲ့ရတဲ့ ဖွိုးမွတျအောငျ ရဲ့ အဖွဈဟာ တနိုငျငံလုံးက ပရိသတျတှေ ကို စိတျမကောငျးဖွဈခဲ့ရပါတယျ ။ အိုငျဒေါဝငျနာ တဈယောကျ ဖွဈပမေယျ့ ၊ အမြားနညျးတူ လကျမှတျပါခဲ့ပမေယျ့ လုံခွုံရေး ကိုယျတိုငျက ပေးမဝငျခဲ့တာကွောငျ့ အိုငျဒေါ ရဲ့ တာဝနျရှိသူတှေ ကို မေးခှနျးထုတျစရာဖွဈလာခဲ့ပါတယျ ။
လတျတလောမှာ မွနျမာအိုငျဒေါ တာဝနျရှိသူတှကေ အဆိုပါကိစ်စ ကို ပွနျလညျဖွရှေငျးပေးထားခွငျး မရှိသေးပါဘူး။ လကျရှိမှာ အိုငျဒေါ မှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဝနျထမျးတဈယောကျ က ဖွိုးမွတျအောငျ ကို ခှေးနဲ့ နှိုငျးပွီးပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ Nyan Lynn Aung အကောငျ့ပိုငျရှငျက “ခှေးတောငျမှ ထမငျးကြှေးတဲ့ လကျကို ပွနျကိုကျရငျ အစာငတျသေးတာပဲ… ခှေးထကျတော့ ဦးဏှောကျရှိစမျးပါကှာ…စောကျရူးနားကနျး လို ထုံအအ လုပျမနနေဲ့ ညီလေး….” ဆိုတဲ့ စာကို တငျခဲ့ပါတယျ။ ဖွိုးမွတျအောငျ ဖနျဂရုတှထေဲမှာ အဆိုပါ စာဟာ တောမီးလိုပြံ့နှံ့ခဲ့ပါတယျ။
နာရီအတျောကွာတဲ့အခါမှာ “ခှေးတောငျမှ ထမငျးကြှေးတဲ့ လကျကို ပွနျကိုကျရငျ အစာငတျသေးတာပဲ…ခှေးထကျတော့ ဦးဏှောကျရှိစမျးပါကှာ…စောကျရူးနားကနျး လို ထုံအအ လုပျမနနေဲ့ ညီလေး….မငျးတို့ ထငျတဲ့ PMA ကို ငါမပွောဘူး..ငါမှာ သူက လှဲလို့ အခွား အသိမရှိရဘူး လာ??? ဆိုပွီးစာကို ပွနျပွငျခဲ့ပါတယျ။ …
ပရိသတျကွီးရေ၊ အခုလို ပွောဆိုလိုကျတဲ့အပျေါမှာ ဖွိုးမွတျအောငျ ရဲ့ ပရိသတျတှကေ တျောတျောလေးဒေါပှခဲ့ကွတာပါ ။ အခုလို ဖွဈခဲ့ရတဲ့အပျေါ ဒီလိုမြိုး ပွောဆိုသငျ့သလား ဆိုတာမှတျခကျြလေးတှပေေးခဲ့ကွပါဦး။
Source – Nyan Lynn Aung
“ ဖော်ထုတ် ခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားချော မိုးယံဇွန် ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး ”